बागलुङमा भेटिए स्क्रब टाइफसका बिरामी, के बाट सर्छ यो रोग ? – Sanchar Patrika
बागलुङमा भेटिए स्क्रब टाइफसका बिरामी, के बाट सर्छ यो रोग ?
August 8, 2020 524
गलकोट । बागलुङमा स्क्रब टाइफसका बिरामी फेला परेका छन् । बागलुङको धौलागिरि अस्पतालमा उच्च ज्वरो आएर उपचारका लागि आएका तीन जनामा स्क्रब टाइफस देखापरेको अस्पतालले जनाएको छ । प्राणघातक सङ्क्रमणका रुपमा लिइँदै आएको स्क्रब टाइफस यही साउन महिनामा मात्रै तीन जनालाई फेला परेको धौलागिरि अस्पतालका सूचना अधिकारी तीर्थ गौतमले जानकारी दिए ।
बुधवार मात्रै उच्च ज्वरो आएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको जैमिनी नगरपालिका–२ का ४२ वर्षीय पुरुषमा स्क्रब टाइफस देखिएको छ । उनी धौलागिरि अस्पतालमा भर्ना गरी उपचाररत छन् ।
Nextसमुदायस्तरमा कोरोना संक्रमणको अवस्था पत्ता लगाउन गरिएको परीक्षणमा ३ जनामा संक्रमण पुष्टि